Nagu saabsan - Xuzhou Honghui Glass Products Co., Ltd.
Xuzhou Honghui Glass Products Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa xaafada Junsheng, Magaalada Xuzhou. Waa shirkad warshad iyo ganacsi isku dhafan horumarka iyo waxsoosaarka, qaabeynta, wax soo saarka, iibka iyo ganacsiga. Waxaan xaq u leenahay dhoofinta badeecadaha. Warshadeena Waxaan xaq u leenahay dhoofinta alaabada. Warshaddeenu waxay leedahay ku dhawaad ​​30 sano oo horumar iyo khibrad soo saar ah. Shirkadeena waxay qaadataa tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan iyo tikniyoolajiyad qoto dheer oo farsamo, waxaan heysanaa qalab iyo qalab tijaabo oo heer sare ah, si aan uheno awood horumarineed oo xoogan. Tayada alaabada muraayadaha si adag ayaa loo xakameeyaa, waxayna ku guuleysatay macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. Wax soo saarkayaga waxaa loo dhoofiyaa Mareykanka, Ruushka, Canada, Australia, Vietnam iyo dalal kale oo 100 ah.
Shirkadda waxaa la aasaasay bishii Febraayo 2015, waxaan haynaa 5 waaxood, oo ay ku jiraan waaxda ganacsiga ajaanibta, waaxda ganacsiga gudaha, waaxda wax soo saarka, iwm. Waxay leedahay websaydhka Alibaba iyo 1688 websites. Shirkadeena waxay leedahay in kabadan 50 xirfadlayaal farsamo maamuleyaal ah iyo maareeyayaasha iibka. Intaa waxaa dheer, waxaan haynaa koox naqshadeyn xirfad leh, sidaa darteed waxaan u qaabeyn karnaa noocyo cusub oo dhalooyin ah iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha isla markaana u sameysan karto caaryo cusub macaamiisha muddo kooban
Waxaan sidoo kale bixinnaa dhammaan noocyada dhalooyinka quraaradaha loo habeeyay ee qoto-dheer, sida qaboojinta, koronto-gelinta, buufinta, qalabka iyo daabacaadda shaashadda. dhalooyinka dhaqanka, dhalooyinka sharaabka kala duwan, shumacyada wax lagu shubo, taangiyada wax lagu keydiyo, dhalooyinka qurxinta iyo waxyaabaha tijaabada ah ee kiimikada kala duwan, muraayadaha dhalada iyo wixii la mid ah.Waxaan leenahay nidaam adeeg oo dhameystiran, waxaan ku bixin karnaa alaabada wakaalada, sida gaadiidka gawaarida, tareenka, gaadiidka badda iyo gaadiidka hawada. Xuzhou Honghui waxyaabaha muraayadaha Co., Ltd. waxay soo dhaweyneysaa macaamiisha adduunka oo idil, waxaan rajeyneynaa inaan noqdo lammaanahaaga lagu kalsoon yahay!